Wararkii ugu danbeeyay doorashada iyo Kulamada Caawa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wararkii ugu danbeeyay doorashada iyo Kulamada Caawa
Wararkii ugu danbeeyay doorashada iyo Kulamada Caawa
Wararkii ugu danbeeyay doorashada:
Rajo yar ayaa muuqata marka la eego kulamadii xalay dhacay ee dhexmaray hogaamiyayaasha shanta maamul goboleed Puntlad, Galmudug , K/Galbeed iyo hir-shabeele.
waxaa loobalamay in kulankale barito markale ay maamulada isku arkaan Hotel kuyaala Xalane.
Maanta waa jimce wax kulan madhicin balse caawa ayaa waxaa bilawday kulamo ka horeeya midka berito.
Xiligan waxaa kulan uu usocdaa Madaxweyne qoor qoor xubno katirsan madasha bad baado qaran, kulankan ayaa ka socda Hotel Airport oo ay dagan yihiin Dani iyo A.madoobe.
wax yar kadib ayaa lafilayaa in Qoor qoor uu hadana kaqayb galo kulan madaxtooyada kadhacaya kaa soo uu qaban qaabiyay M.Farmaajo iyadoo ay kaqayb geli doonaan Farmaajo iyo Sadexda maamul goboleed Hir-shabele, Galmudug iyo Koofur Galbeed.
Hadii aanu caqabad horleh keenin kulanka madaxtooyada, waxaa lafilayaa in kulanka beri dhacaya ay shanta maamul goboled isku fahmaan waxyaabaha la isku hayo.
Wararka ayaa sheegaya in madaxda Maamulada Puntland iyo Jubbaland ay shirkii xalay ka sheegeen in sababta ay ugu qeyb geli waayeen shirkii maalmahan u socday madaxweyne Farmaajo iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ay tahay cabasho ay ka qabaan habka uu wax u wado Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Deni iyo Axmed Madoobe ayaa soo jeediyay in ciidamada dowladda gabi ahaan laga saaro xerada Afisyooni, isla markaana amniga lagu wareejiyo ciidamada AMISOM.
Qodobada kale ay ku doodeen waxaa ka mid ah in laga heshiiyo jadwalka shirka, isla markaana madaxweyne Farmaajo uusan shir guddoomin kulanka, lana helo qof damaanad qaada fulinta waxyaabaha lagu heshiiyo.
Qodobadan qaar ayaa la isku afgartay halka kuwa kale xalintooda beri loo balansan yahay.
Previous articleKenya oo warkale kasoo yeeray
Next articleXaalad Cabsi ah oo ka jirta kulanka Baarlamaanka eeMaalinta Bari kulan Muda kor dhin ah leh
Qasaaraha ka dhashay Qaraxii shalay degaanka Gololey oo soo kordhaya
Mareykanka oo shegay inay tahay waqtigii ugu haboonaa ee ciidammada Mareykanka laga soo saari lahaa Afghanistan
Mohamed Abdullahi Mohamed - February 16, 2021 0
Dagaalka ba'an ee ka dhax jiro Maamulka Gobolka benaadir Oo Saameyey Qaar ka tirsan Shaqaalaha Gobolka benaadir Iyo Cali Yare Cali oo lagu bahdilay...
Madaxweyne Waqtiigsa dhamaaday Oo shir uu Dibad joog ka yahay ka...
Taliyaha booliska Minneapolis oo Eedayn u soo jeediyay askartii dishay George...
Amiirka Dalka Qatar oo ka tacsiyeey geerida ku timid Madaxweynihii hore...
Gantaalo lagu garaacay qeybo kamid ah waqooyiga Siiriya iyo Ciidamo Tuurky...
Ugandha: Waxaa socota tirinta codbixinta kadib doorashadii adkeed
Madasha Badbaado Qaran oo Farmaajo ku eedeysay inuu dayacay ciidanka XDS...
Farmaajo daraja ka xayuubintii Jeneraal Saadaq Joon Taliyihii booliska...
Ciidamada Maraykanka oo ku qabtay labo doon oo ay saarnaayeen hub...
Mohamed Abdullahi Mohamed - February 17, 2021 0